आमहडतालले सकस: परीक्षा प्रभावित, बिरामी हिँडेरै अस्पताल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आमहडतालले सकस: परीक्षा प्रभावित, बिरामी हिँडेरै अस्पताल
एलएलबी दोस्रो वर्षको बिहीबारको परीक्षा आधा घण्टा ढिलो सुरू
ट्याक्सीबाट जबर्जस्ती ओरालिए बिरामी
माघ २३, २०७७ गणेश राई, फातिमा बानु
काठमाडौँ — नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले गरेको आमहडतालका कारण बिहीबार एलएलबीका परीक्षार्थी प्रभावित भएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको एलएलबी दोस्रो वर्षको परीक्षाको दोस्रो दिन प्रोपर्टी ल विषयको परीक्षा थियो । आमहडतालका कारण बिहान ८ बजे तोकिएको परीक्षा केही ढिलो गरी सुरु भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
आमहडतालका कारण काठमाडौंमा बिहीबार सार्वजनिक सवारी नचलेपछि परीक्षार्थीलाई लिएर गइरहेको ट्याक्सीलाई अवरोध गर्दै प्रदर्शनकारी । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर
परीक्षा सञ्चालन भए पनि धेरै परीक्षार्थी अनुपस्थित थिए । त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस परीक्षा केन्द्रमा ६ सय परीक्षार्थीमध्ये ३ सय ३० जनामात्र उपस्थित भएको केन्द्राध्यक्ष तथा सहायक क्याम्पस प्रमुख एमपी कोइरालाले बताए । ‘एलएलबी कुनै विषयमा स्नातक गरेपछि पढ्न पाइने विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यस कारण परीक्षार्थी शतप्रतिशत उपस्थित हुँदैनन् । तर बिहीबार दोस्रो दिनको परीक्षामा धेरै अनुपस्थित रहेको पाएका छौं । आमहडतालकै कारण उपस्थित भएनन् कि भन्ने लागेको छ ।’
बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पस केन्द्रका परीक्षार्थी विकास राईले सवारीसाधन नचल्दा सास्ती बेहोर्नुपरेको बताए । ‘अचानक आमहडताल घोषणाले हामी परीक्षार्थीलाई सास्ती भएको छ,’ कोटेश्वरमा बस्दै आएका उनले भने, ‘परीक्षा केन्द्र कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ताले सतायो । हिँडेरै जाँच दिन पुगियो ।’ पाटन संयुक्त क्याम्पस केन्द्रकी परीक्षार्थी मञ्जु खड्काले पनि आमहडतालले अन्योलमा परेको बताइन् । ‘बल्लतल्ल हिँडेर परीक्षा केन्द्र पुगियो र परीक्षा हुने कि नहुने भन्ने अन्योल भयो,’ उनले भनिन्, ‘परीक्षार्थीको अनुरोधले आधा घण्टा ढिलो गरी जाँच दिन पायौं । पठाओमा फर्किएँ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत बुधबारदेखि एलएलबी दोस्रो वर्ष नियमिततर्फको परीक्षा सुरु भएको हो । उक्त तहका विभिन्न १३ विषयको परीक्षा फागुन ५ गतेसम्म चल्नेछ । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार एलएलबीमा देशभरबाट १३ हजार परीक्षार्थी सहभागी छन् । त्रिविअन्तर्गत शुक्रबारदेखि स्नातकोत्तर वार्षिक प्रणाली (पुरानो कोर्स) को परीक्षा सुरु हुनेछ । एमए राजनीतिशास्त्र, एमपीए र एमएड्का गरी १६ हजार परीक्षार्थी रहेको नियन्त्रक जोशीले बताए ।
वीर अस्पतालमा फलाअ‍ेपका लागि म्हेपीबाट छोरीसहित पदैल आएकी ६५ वर्षीया चन्द्रमाया बस्‍नेत । तस्बिर : अनिश रेग्मी / कान्तिपुर
आमहडतालका कारण बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश विद्यालय बन्द रहे । कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष गत पुसबाट मात्र आंशिक रूपमा विद्यालय खुलेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले कुनै विद्यालय नखुलेको बताए । ‘विद्यालय आंशिक रूपमा मात्र खुलाउन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘शुक्रबार पनि उपत्यकामा आमसभा हुने सुनिएको छ । विद्यालय प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।’
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले आमहडतालले विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रभावित तुल्याएको बताए । ‘तर, कुनै अप्रिय दुर्घटना घटेको छैन,’ उनले भने । उपत्यकामा १ हजार ३ सयभन्दा बढी विद्यालय छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले आमहडतालले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको बताए ।
आमहडतालका कारण अस्पताल जाने बिरामीले पनि सास्ती भोग्नुपर्‍यो । राजधानीका ठूला सरकारी अस्पतालको ओपीडीमा निकै कम बिरामी पुगे । दिनमा लगभग १ हजार ५ सय बिरामी पुग्ने वीर अस्पतालमा आधा जति बिरामी मात्रै आएको निर्देशक डा.केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए । ‘अस्पतालतर्फ कुनै सवारीसाधन आउन दिएनन्, म पनि हिँडेर आएँ,’ उनले भने, ‘ट्याक्सी चढेका बिरामी पनि सहिदगेटमै रोकेपछि अस्पताल आउन पाएनन् ।’
निर्देशक डा. सेन्चुरीले स्वास्थ्यकर्मी टाढाबाट आउनुपर्ने भएकाले आकस्मिक र शल्यक्रिया सेवामा समेत असर परेको बताए । दिनमा करिब १ हजार २ सय बिरामी पुग्ने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पनि बन्दको प्रभावमा पर्‍यो । सवारीसाधन नचलेकाले नयाँ बिरामी भर्ना हुन र पुराना बिरामी डिस्चार्ज भएर घर जान नपाएको अस्पतालका प्रवक्ता रामविक्रम अधिकारीले बताए । ‘नियमित सेवामा असर पर्‍यो तर पहिलेका बन्दमा जस्तो धेरै प्रभाव परेन,’ उनले भने, ‘घर जानैपर्ने बिरामीलाई अस्पतालकै एम्बुलेन्समा हालेर पठायौं ।’
घाइते, हाडजोर्नी र चोटपटक लागेका बिरामी पुग्ने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा बन्दका कारण कर्मचारीलाई एम्बुलेन्समा ओसारपसार गर्नुपरेको थियो । यो अस्पतालमा दिनमा ३ सय हाराहारी बिरामी पुग्थे । बिहीबार भने यो संख्या आधा भयो । बेड पाउन मुस्किल हुने आकस्मिक कक्षमा पनि चाप थिएन । नयाँ बिरामी भर्ना लिन र पुराना बिरामी घर पठाउन अप्ठेरो परेको अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले बताए । घाइतेहरूको उपचारमा ढिलाइ गर्दा ज्यान जाने, जीवनभर अंगभंग हुनुपर्ने भएकाले बन्दका कारण उपचारमा प्रभाव पर्न नहुने उनले बताए ।
दिनमा एक हजार जनाले जाँच र उपचार गराउने पाटन अस्पतालमा बिहीबार वरपरका बिरामी मात्रै पुगे । ‘बन्दको दिन खाली हुन्छ भनेर अस्पताल नजिकका मानिस धेरै आए तर टाढाबाट कोही आएनन्,’ अस्पतालका निर्देशक डा.रवि शाक्यले भने, ‘बिरामी डिस्चार्ज हुन पाएनन् ।’ आफ्नै सवारीमा अस्पताल आउने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई पनि बाटोमा आन्दोलनकारीले रोकेको उनले बताए । ‘कोरोनाले यसै पनि बिरामी घटेका थिए,’ डा शाक्यले भने, ‘बिस्तारै बिरामीको संख्या बढ्दै थियो, फेरि यस्तै अस्थिरताले अस्पतालको सेवामा असर पुग्ने भयो ।’
दिनमा ६ सय बिरामी पुग्ने बानेश्वरस्थित निजामती अस्पताल (सिभिल) मा पनि आधा बिरामी घटे । सवारीसाधन सञ्चालन सहज नहुँदा फोनमार्फत काटिएका टिकट पनि रद्द भएको अस्पतालका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीले बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई भने अस्पतालको गाडीमा ल्यायौं,’ उनले भने, ‘ओपीडी र आकस्मिक कक्ष सुनसान जस्तै भयो । यसको असर भोलि बिरामीको संख्या दोब्बर हुन्छ । त्यति बेला व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
दिनमा ५ सय बिरामी पुग्ने बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा पनि बिहीबार अरू बेलाजस्तो चहलपहल देखिएन । टाढाका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल पुग्न नसकेको निर्देशक डा.चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । ‘बाटैमा रोकिएपछि केही स्वास्थ्यकर्मी बिदामा बस्नुभयो,’ उनले भने, ‘बिरामी कम आएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने खासै असर परेन ।’
प्रकाशित : माघ २३, २०७७ ०७:५५
उपत्यकामा दिनमा सय किलो मार्सी
माघ २३, २०७७ राजु चौधरी
काठमाडौँ — खाद्य संस्थानले एकताका कर्णालीका उत्पादन सिमी, फापर बेच्दै आएको थियो । बजार भाउभन्दा किलोमै ३०/४० रुपैयाँ सस्तोमा बेचे पनि सर्वसाधारणले यी वस्तुप्रति उति चासो दिएनन् । लिलाम गर्दासमेत बिक्री नहुने अवस्था आएपछि खाद्यले २०७४ यता यी वस्तु किन्न छाडेको थियो । जब कि कर्णालीकै उत्पादन खरिदबिक्रीका लागि सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको थियो ।
खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनेपछि कर्णालीको उत्पादनले पुनः प्राथमिकता पाउन थालेको छ । परीक्षणस्वरूप खाद्यले सुर्खेतबाट २ हजार ७ सय किलो मार्सी चामल खरिद गरेर बिक्री गरिरहेको छ । मार्सी चामल खाद्यका थापथलीलगायत आउटलेटमा राखिएको छ । ‘बजार बुस्ट गर्न नेपाल फुड ब्रान्डमा बिक्री थालेका हौं,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘मार्सी चामलको प्रतिक्रिया सकारात्मक आएको छ । ट्रायलमा पास भएका छौं । बिक्री परिमाणबाट उत्साहित पनि छौं,’ उनले भने ।
माघ १५ देखि बिक्री थालेको खाद्यले बिहीबारसम्म ७ सय ९५ केजी मार्सी चामल बेचिसकेको छ । बिहीबार बन्द हडतालकै दिन पनि ७४ किलो बिक्री गरिएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन् । ‘दैनिक करिब १ सय किलोका दरले बिक्री भइरहेको छ । अहिलेसम्म ७ सय ९५ किलो बिक्री भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुकै दिनदेखि बिक्री उत्साहजनक छ ।’
कम्पनीले थापाथली, नख्खु, रामशाहपथलगायत आउटलेटबाट मार्सी चामल बेचिरहेको छ । मूल्य प्रतिकिलो २ सय २५ रुपैयाँको तोकिएको छ । कम्पनीका बिक्रीवितरण विभाग प्रमुख भीम थापाले पनि उपत्यकाबासीले मार्सी चामल अति रुचाएको प्रतिक्रिया दिए । यसको थप बजारीकरणका लागि जुम्लाबाट मार्सी धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘किसानले आइतबार मात्रै ६० क्विन्टल धान ल्याएका थिए, त्यो किनिसकेका छौं,’ थापाले भने, ‘थप खरिद र गुणस्तर पहिचान गर्न नेपालगन्जबाट प्राविधिक टोली जुम्ला जाँदै छ । त्यसपछि धान खरिदलाई तीव्रता दिन्छौं ।’
खाद्यले धान खरिद गर्नकै लागि प्राथमिक खरिद समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा सम्बद्ध जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहन्छन् । सदस्यमा खाद्य कम्पनी, कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि कार्यालयले तोकेको किसान हुन्छन् । टोलीले स्थानीय उत्पादन, बजार मूल्य र सीमावर्ती मूल्य विश्लेषण गरेर उचित मूल्य तोक्ने गरेको छ । समितिले जुम्लाको मार्सी धानको मूल्य प्रतिकिलो १ सय २ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिसकेको छ । ‘प्राविधिक टोलीले धानको गुणस्तरलगायत सम्पूर्ण पक्ष हेर्छ । त्यसपछि प्राविधिककै रोहवरमा खरिद हुन्छ,’ थापाले भने, ‘त्यसरी किनिएको धान प्रशोधन गरी सस्तो दरमा चामल बनाएर बेच्छौं ।’
खाद्यले चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लाबाट तीन हजार क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसपछि प्रशोधन गरेर चामल बनाउनेछ । ‘जुम्लाबाट धानलाई नै जोड दिएका छौं । धान खरिद गर्दा चामलको मूल्य थप घट्न सक्छ,’ थापाले भने । खाद्यले बेचिरहेको मार्सी चामलको मूल्य बजारभाउभन्दा सस्तो रहेको कम्पनीको दाबी छ । अब मार्सीसँगै गेडागुडी पनि खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसले किसानलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने खाद्यको दाबी छ ।
हाल खाद्य कम्पनीले कर्णालीकै सिमी प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँमा बेचिरहेको छ । थप बजारीकरण गर्न तत्काल दुई सय क्विन्टल सिमी खरिद गर्ने कार्यक्रम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जिल्लामै रहेको मूल्य निर्धारण समितिले सिमीको खरिद मूल्य १ सय ४३ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकेको छ । उक्त मूल्यमा ढुवानी, लोडअनलोड, प्याकेजिङसहित गरेर बजारभाउभन्दा सस्तोमै बिक्री गरिने थापाले जानकारी दिए । दैलेखबाट भटमास पनि किनेर बेच्ने योजना रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित : माघ २३, २०७७ ०७:४७